I-LEI-U | Umkhiqizi we-Smart Door Lock
Isifundi seminwe esizwela kakhulu
Isithwebuli seminwe yeminwe ye-LEIU ehlakaniphile, esine-semiconductor yayo, ihlala ilungele ukuthathelwa phezulu nokushesha okukhulu.Ijubane lokuqashelwa lenzelwe ukuhlala ngaphansi kwama-0.3s, kanye nesilinganiso sokwenqaba esingaphansi kuka-0.1%.
Isikhathi semodi yokudlula
Gcina ukulawula i-Smart Lock sakho bese uhlola isimo noma kunini ku-smartphone yakho. Phatha izimvume zokufinyelela zabangane bakho nabathandekayo bakho.
Awekho amaphasiwedi abiwe ngenxa ye-Bluetooth
Ukufinyelela nge-Bluetooth kususa noma yikuphi okungenzeka ukuthi iphasiwedi yakho ivezwe kumakhamera afihliwe abantu ongabazi.
Ukuhlakanipha kulula kakhulu kunalokho ucabanga
Inkinobho eyodwa ezenzakalelayo, elula izingane nasebekhulile Ukuphepha nokwethembeka kufakiwe ekwakhiweni kwawo wonke umsebenzi nemininingwane.
Ilokhi ye-LEI-U LVD-06 Smart iyahambisana ne-Amazon Alexa, i-google home, IFTTT. Ihlanganisa izindlela ezinhlanu zokhiye ongaphansi kokungena ku-1 smart lock, Finger Print, ikhodi yokudlula, ikhadi le-RFID, ukhiye ophuthumayo, uhlelo lokusebenza lweselula. Ukuqashelwa kweminwe okunembe kakhulu, vula umnyango ngaphakathi kwemizuzwana engu-0.3, bese ugcina izigxivizo zeminwe ezifika kwezingu-120.
Ukutholwa Lei-u Okwakho
Ukwethulwa kweLeiyu "I-Smart Apartment Plan" kutholakale ukuphathwa okulula kwendlu, Ukuhlaliswa komthethosivivinywa, ukuxazululwa kwehhotela / indawo yokuhlala / ikhaya nezinkinga eziningi zokuphathwa kwempilo, futhi kunikeza isisombululo esenziwe ngokwezifiso ngendlu eqashisayo, ifulethi eliqashisayo, ukuphathwa kwamahhotela, ihhovisi lenkampani.
Uyini umehluko phakathi kokukhiya okuhlakaniphile kwe-LEI-U nokunye ukukhiya emakethe?
Isitayela esisha sokukhiya okuyindilinga, kufanelana nentende yesintu, kulula ukusingatha futhi uhlanganise yonke imisebenzi yobuchwepheshe.
Sisebenzisa ubuciko obusha obufana ne-i-aluminium aluminium. Isithwebuli somunwe, esine-semiconductor yaso, sihlala sikulungele ukucaciswa okuphezulu nokushesha okukhulu.Ijubane lokuqashelwa lenzelwe ukuhlala ngaphansi kwama-0.3s, futhi isilinganiso sokwenqaba esingaphansi kuka-0.1%
Kuthiwani uma umnyango ungeke uvulwe nge-smart lock?
Lapho umnyango ungeke uvulwe ngokungena kwezigxivizo zeminwe, sicela ubheke ukuthi ngabe kubangelwa yilezi zizathu ezilandelayo: Ukungasebenzisani kahle 1: Sicela uqinisekise uthi lokuphotha uma ufaka bese uphendukela ohlangothini olufanele (“S”). Ukungasebenzi kahle 2: Sicela ubheke isibambo sangaphandle ukuthi ngabe ucingo luvezwe ngaphandle futhi aluzange lubeke emgodini.
* Sicela ulandele ibhukwana lomsebenzisi noma i-vedio ukufaka i-smart lock, ungafaki ngomcabango.
Kwenzekani uma amabhethri e-smart lock ewa phansi?
I-LEI-U Smart Lock isebenza ngamabhethri amane ejwayelekile e-AA. Lapho nje ukuthi izinga lokushaja ibhethri liwela ngaphansi kuka-10%, ilokhi ehlakaniphile ye-LEI-U ikwazisa ngethoni esheshayo futhi uba nesikhathi esanele sokushintsha amabhethri. Ngaphandle kwalokho, inguqulo entsha ye-LEI-U engeza imbobo yamandla okuphuthumayo ye-USB futhi futhi ungasebenzisa ukhiye wakho ukukhiya / ukuvula .Impilo yebhethri emaphakathi icishe ibe yizinyanga eziyi-12. Ukusetshenziswa kwamandla kwe-Smart Lock kwakho kuya ngemvamisa yezenzo zokukhiya / zokuvula kanye nokwenza lula kokukhiya. Ungathola imininingwane eminingi ngamabhethri lapha.
Thumela umkhiqizo wakho ku-LEIU
Ku-inthanethi noma ngocingo, sizohlela ukuthunyelwa komkhiqizo wakho eMnyangweni Wezokulungisa i-LEIU - konke kusheduli yakho. Le sevisi iyatholakala kwimikhiqizo eminingi ye-LEIU.
Ngingakwazi ukuvula umnyango ukude ngisebenzisa i-App?
Yebo, vele uxhume ngesango.
I-LEI-U Smart ngumugqa omusha womkhiqizo weLeiyu ohlakaniphile futhi wasungulwa ngo-2006, otholakala ku-No. 8 Lemon Road, Ouhai Economic Development Zone, Wenzhou City, Zhejiang China.Leiyu base base Taishun okungumenzi wobungcweti obuchwepheshe, isitshalo sokukhiqiza sihlanganisa indawo ecishe ibe ngamamitha-skwele ayi-12,249, abasebenzi abangaba ngu-150.Umkhiqizo oyinhloko kufaka phakathi ukukhiya okuhlakaniphile, ukukhiya ngomshini, izesekeli zomnyango newindi.
Kusukela ngo-2013 ukubambisana kwe-LEI-U noVanke futhi kwaba ngumhlinzeki we-A-level kaVanke, enikezela ngamasethi angama-800,000 okhiye beVanke Group minyaka yonke, futhi bakhe ubudlelwane besikhathi eside.
I-LEI-U ihlinzeka ngezinsizakalo ze-ODM kubantu abangaphezu kuka-500 abasebenza embonini yokukhiya, ehlanganisa iningi labakhiqizi abakhulu bezikhiye emhlabeni jikelele.
Uhlelo lwe-LEI-U Smart Apartment
Kufezwe ukuphathwa okulula kwendlu, Ukuhlaliswa komthethosivivinywa, ukuxazululwa kwehhotela / ifulethi / ukuhlala ekhaya kanye nezinkinga eziningi zokuphathwa kwempilo
Mayelana nomlando we-LEI-U
No.8 Lemon Road, Ouhai Economic Development Zone, Wenzhou Idolobha, Zhejiang, China